Free Ilanis EA - Best Forex EA's | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
Nke a bụ nsụgharị free nke Ilanis EA. The Forex robot mepee naanị ịzụta ahia. Nke a na-enye ohere iji nyochaa opera nke EA, usoro nchịkwa ego na njikwa ọnọdụ. Enwere ike iji ya maka ahia na ezigbo akaụntụ. Mana arụmọrụ nke zuru ezu dị ukwuu.
The Ilanis EA E bipụtara na "Ahịa" na June 5, 2014. E tinyela ụdị nke free site na ihe ndị a ma ama nke ndị ahịa chọrọ iji nye ohere nke nnwale dị mma.
Ilanis Free bụ na ọkachamara Advisor maka ahia ahia, enwere ike iji ya maka ahia na Forex na ndi ozo di iche iche, tinyere ndi ahia ahia, ahia na onu ogugu.
EA na-eji njirimara nke oge a na ultra-light indicative FourAverage maka ịchọta isi ihe ntinye ahịa.
Ụkpụrụ nke ịnọgide na-enwe njikwa yiri nke nke Forex robot Ilan a na-ewu ewu, na-eji iji ụgwọ. Ma n'adịghị ka Ilan, Ilanis na-eji ntinye ziri ezi banye ahịa. Onye robot na-eleba anya n'ọchịchị, ma ọ bụrụ na ego ahụ na-aga n'usoro a na-atụghị anya ya. Maka Ebumnuche a, EA na-eji nrịba nrịbawanye nke dabeere na Martingale (A pụrụ itinye ọnụ ọgụgụ ExpLot na ntọala, site na 1.1 ruo 1.8).
Ahịa na-adabere n'echiche bụ na 80% nke oge ahịa na-aga n'ihu. Ogologo oge nwere ike ịdị ize ndụ maka ndụmọdụ ọkachamara, mana ha anaghị adịkarị. Ihe ụfọdụ pụrụ iche, dị ka agha, ida akụ na ụba, na ihe ndị ọzọ, nwere ike ime ka ụdị ọnọdụ ndị a. Enwere ike ịchọta ozi gbasara ihe ndị a na saịtị mgbasa ozi. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji gbanyụọ EA n'ọnọdụ dị otú ahụ. Ọ bụrụ na nke a adaala, site na usoro nchịkwa ego a na-arụ, robot nwere ike n'ọtụtụ ọnọdụ iji mee ka ngwakọta ya (ọbụna ndị na-emeghe megide ememe) iji nweta uru, ọnụ ọgụgụ nke a nwere ike nke ukwuu karịa nke e mere atụmatụ. Ọ bụ ezie na ihe ize ndụ dị elu na nke a.
Isi iwu mgbe ị na - arụ ọrụ na Ilanis: enwela anyaukwu, emela otutu ihe, jiri ntọala ndị a nwetara mgbe ịchọrọ mma. Echefukwala ịkwalite izu maka ahịa nke ugbu a site n'oge ruo n'oge.
A na-ahazi ọkachamara ọkachamara na-arụ ọrụ na EURUSD, M15
Ndụmọdụ ọkachamara n'efu na Ilanis:
Na-arụ ọrụ na ebe ntanetị niile na-eji MetaTrader 4 trading platform.
Arụrụ ọrụ ma ndị ntanetị “Egburu Ozugbo” na “Ndị Ezubere Ahịa”.
Na-ekpebi ọnụọgụ nọmba nke nọmba na ntanetị ma na-arụ ọrụ na ọnụego nwere ọnụ ọgụgụ ọ bụla ọnụ ọgụgụ ebe.
Na-eguzogide njikọ ebighi ebi nke njikọ ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa kọmputa. Mgbe ịmalitere kọmputa ahụ, ọkachamara ọkachamara ga-eburu iwu ya ma nọgide na-azụ ahịa.
Na-arụ ọrụ naanị site na iwu nke aka ya ọbụlagodi na ị kpebiri ịzụ aka na aka.
Ilanis EA n'efu - Ọnọdụ azụmahịa
Ahịa ahia: MetaTrader 4.
Ebe na-emekọrịta ihe: ebe ọ bụla na-akwado ọrụ na MetaTrader 4.
Ụkwụ ego: ọ bụla.
Oge etiti: enweghị mmachi.
Nke kacha nta: 0.01.
Ihe ntinye: 1: 100 ma ọ bụ karịa.
Ilanis Free EA - Ntọala
- = TBAT BU BULỌ = -
PeriodFA1 - Oge anọ gosipụtara
Average1_1 - FourAverage ruru (0 - 200)
- = Ichekwa ego eji abanye ego = -
Gbasaa - Ọnụ Lot na-amụbawanye maka iwu ndị ọzọ n'usoro.
StLot - Nhọrọ dị ukwuu nke usoro mbụ. Ọ bụrụ na uru ahụ dị mma, a na-eji ya dị ka ihe edozi (Ihe Nlereanya: Lot = 0.01, a ga-emeghe azụmahịa nke 0.01). Ọ bụrụ na uru ahụ adịghị mma, EA ga-emepe nzapụta 0.01 maka ego ọ bụla a kapịrị ọnụ na nkwụnye ego (Ihe Nlereanya: Lot = -100, $ 500 dị na akaụntụ ahụ, a ga-emepe ahia ahụ na nha nke 0.05).
StopIlanis - Emeghe oghere ọhụrụ, a ga-aga n'ihu.
Ohere - Bido na oge a iji mechie oghere nke ọhụụ (ọ bụrụ na WindowHour_ = 10 na _WindowHour = 15, ọ nweghị ahia ọhụụ ka a ga-emeghere n'etiti oge n'etiti 10: 00 na 16: 00).
_WindowHour - Ọgwụgwụ nke oge iji igbachi oghere nke ọhụụ (ọ bụrụ na WindowHour_ = -1 na _WindowHour = 15, ọ nweghị ahia ọhụụ ka a ga-emeghere site na mmalite nke ụbọchị ruo 16: 00).
TDW_TradeFalse - itivekpụrụ dị mma pụtara ụbọchị izu ahụ mgbe EA agaghị emeghe ahịa (ma ọ bụrụ na TDW_TradeFalse = 5, a gaghị emeghe ọnọdụ ọhụụ na Fraịde, EA ka ga-emechi ọnọdụ).
- = TBỌTA AH OR Na -
MaxSpread - O buru na mgbasa di ugbua kariri uru a, ahia a gaghi emeghe.
MagicNumber - Amalite site na ọnụọgụ anwansi nke Ọkachamara Ndụmọdụ nwere. Ndi EA nwere nọmba 50.
Slippage - anaghị ekwe ọsịsọ.